कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड खर्च « Philco Mission
कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड खर्च
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँखर्च भएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत साउन मसान्तसम्मको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ(सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडा १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्नु भएको छ।
डा. खतिवडाले गत चैतबाट साउन मसान्तसम्म कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको बताए।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए।
जसअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट २ अर्ब १७ करोड खर्च भएको छ। रक्षा मन्त्रालयबाट २ अर्ब ३७ करोड, गृह मन्त्रालयबाट २० करोड ८३ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ६ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ४ करोड ४९ लाख र सहरी विकास मन्त्रालयबाट १ करोड २९ लाख रकम खर्च भएको छ।
कोभिड कोषबाट १ अर्ब ३ करोड विभिन्न निकायलाई दिइएको पनि खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।
यस्तै प्रदेशहरूबाट झण्डै डेढ अर्ब खर्च भएको छ। मन्त्री खतिवडाले १ अर्ब ४९ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए।
उनका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा २० करोड ७१ लाख, प्रदेश नम्बर २ मा १७ करोड २ लाख र बागमती १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशमा १४ करोड ५४ लाख, प्रदेश नम्बर ५ मा १० करोड ५९ लाख, कर्णाली प्रदेशमा २६ करोड २६ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए।
स्थानीय तहबाट ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। सबै रकम औषधि, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खर्च भएको सार्वजनिक गरेको छ।